Toamasina : vaky ny ady eo amin’ny CST Roland Ratsiraka sy CST Irmah | TANANEWS
Toamasina : vaky ny ady eo amin’ny CST Roland Ratsiraka sy CST Irmah
9/07/2012 à 13:43
10 commentaires	TweetMitohy ny tantara. Niha nirehitra ny raharaha mahakasika ny fanavaozana ny lapa maitso manoloana ny biraon’ny kaominina Toamasina. Taorian’ny famoriam-bahoaka nataon-dRoland Ratsiraka sy Botozaza Pierrot ny alakamisy lasa teo, izay nanaovan’izy ireo antso avo amin’ny tsy tokony ikitihana ireo ahi-matso sy palmier manoloana io lapa io, tsy niandry ela ny valin-kafatra avy tamin’ny CST Naharimamy Lucien Irmah izay sady sekretera nasionalin’ny antoko Tgv. Ny sabotsy maraina lasa teo, nanao be midina teo anoloan’ny lapan’ny tanàna ity CST ity sy ireo mpiara-dia aminy izay nahitana an’i Naivo Michel , mpanolotsaina manokan’ny PDS Toamasina ary ny CT Ndalana Hasina Espérant.
Namatapatatra izy ireo fa “fisakanana ny fandrosoan’i Toamasina io fihetsika ataon’ireo mpanao politika sasantsasany eto Toamasina ireo izay misakana ny fanatsarana ny tanànan’i Toamasina. Olona efa nitondra an’i Toamasina ireo olona ireo nefa tsy nisy zavatra vitan’izy ireo teto. Fampanantenana nataon’ny Filoha Rajoelina io fanatsarana ny lapan’ny tanàna io, ka tokony hotohizana hatramin’ny farany. Mahagaga fa isika anateran-kira indray no milaza tsy mahay hihira. Isika mpanao politika indray no manakana ny fampandrosoana ».
Ho an’ny mpanara-baovao politika, dia efa karazany vaky ampahibemaso izao ny ady eo amin’ny CST Roland Ratsiraka sy ny CST Naharimamy Lucien Irmah avy amin’ny antoko Tgv. Ity farany izay mpanao gazety tao amin’ny Canal 6 tamin’ny fotoan’androny.
Efa miambina ny andian-jatovo
Etsy ankilany, nitana ny teny navoakany ingahy Roland Ratsiraka, efa napetrany ao amin’ny lapa maitso ireo andian-tanora hanara-maso sao mbola hanohy ny asa fikitihana ny ahi-maitso ry zareo avy eo anivon’ny SMAPT. Hatreto aloha, nihantona tanteraka ny asa fanavaozana, tsy namerina ny fefy vôlo intsony ny orinasa nahazo ity Tetikasa ity.
Fantsy alohan’ny fifidianana
Mazava amin’ny rehetra koa fa efa karazany hazakazaka ho any amin’ny fifidianana ity fifamelezana fantsy eo amin’ny MTS sy ny Tgv ity. Mazava ary efa takatry ny rehetra fa samy ho kandidà i Roland Ratsiraka sy Andry Rajoelina, ka samy efa miezaka mambabo ny fom-bahoaka.
Hivory tsy ara-potoana ny filan-kevitra kaominaly
Manoloana io raharaha lapan’ny tanàna io, hiatrika fivoriana tsy ara-potoana ireo mpikambana ao anatin’ny filan-kevitry ny tanànan’i Toamasina rahampitso talata amin’ny 10 ora maraina. Tombanana sahady fa ny fanakanana ny fanohizana ny asa fanavaozana ny lapa maitso no fehin-kevitra hivoaka. Ny TIM sy ny MTS mantsy no maro an’isa ao anatin’ny filan-kevitra kaominaly ao Toamasina.
Andrasana arak’izany ny tohin’ity raharaha ity. Raharaha izay tena maha be resaka amin’ny toerana rehetra aleha ao Toamasina ary tsy ataon’ny mpanao politika sy ireo “mersenera” politika ambanin-javatra.
Nangonin’i NIM ( Toamasina)
Verohanitra dit :	09/07/2012 à 14:13	Dia ahoana i Remenabila fa ianareo indray no tena eo anoloan’ny sehatra ? Famonoan’afo sa fandrebirebena ?
Répondre	Sara dit :	09/07/2012 à 14:45	Handefa andRabilamena any Toamasina indray ny HAT fa mila faizina ireo CONCURRENTS ireo!
Répondre	benyaina dit :	09/07/2012 à 14:59	Attention attention !!!
TTS, MTS etc…..
Répondre	fiondranana dit :	09/07/2012 à 15:04	ireo ihany no mpivarotra tanindrazana, mpanao hosoka nogadraina navotsotr’i radjoel teo, ka izao vao mody mifanohitra eo imasombahoaka ???? MTS ve tsy hainao fa , cadre Baomanga avokoa ireny any Toamasina mody mitonona ho Betsimisaraka e?…Betsizaraina, Bemiranga, Bemolotra, Besandry sy Be bokony sns…
Répondre	Boy dit :	09/07/2012 à 15:32	« Mazava amin’ny rehetra koa fa efa karazany hazakazaka ho any amin’ny fifidianana ity fifamelezana fantsy eo amin’ny MTS sy ny Tgv ity ». ka ireo anie na omena avance @ vaton’ny mpifidy aza tsy ho hisy ho lany zany e maika fa hiady an-trano ndray
Répondre	fenomanana dit :	09/07/2012 à 18:18	Tsy rariny koasa raha ny ahimaitso sy palmier tapahina, raha hanisy jeux d´eau azo asina, azo atao ny hantsarana ny endrika fa io palmier io sy bozaka maintso no maha Toamasina an´i toamasina, iÁry tsy fahita eto madagasikara anie ireo palmier ireo, ireo no maha tanana tantsinanana amoontsiraka an´i toamasina.
aza ny fitavam-bola ahazo Marché sy fitiavana laza hanaovana propagande re ny hanimbana ny hasina sy haingon´i Toamasina.
tsy ianareo TGV mpanogam-panjakana izay efa nanimba betsaka teto no mbola hanova sy hanimba.
tetezamita izany tokony tsy misy fanovan-javatra na fanamboara-javatra fa ianareo mianakavy be afera maloto, ka izay vola miditra ao ampaosinareo no jerena voalohany ka hany io atidohakelinareo TGV io tsy misaina intsony .
Répondre	Verohanitra dit :	09/07/2012 à 20:18	Samia mifamaky loha eo ianareo mpanongam-panjakana, ongoty ze tianareo hongotana, azerao ze tianareo azera. Faly zay fa miady an-trano ny foza. De ataovy kou ny ampamoaka fa zany zao no tena mafinaritra. Tsisy sahy hikasika anareo ny emmoreg sy ny emmonat fa foza hoatranareo.
Répondre	ravoalavo dit :	09/07/2012 à 23:17	Fa tsy aleo ve aloha ny bozaka sy ahitra maintin’i Tokanono no amboarina sy hajariana e. Ny an’i Tokanono efa aman-taona maro no tsy nohetezana saingy tsy mba nisy nijery. Tsy azoko mihitsy ianareo, tena marina e
[Répondre]fenomanana a répondu :juillet 9th, 2012 à 23:57@ravoalavo, iza indray ity tokanono ity ravoalavo fa tena tsy arakay gasy tsotra.
[Répondre]Verohanitra a répondu :juillet 10th, 2012 à 20:31@fenomanana, vadin-drabenamila re i Tokanono e ! Ralebamina mantsy e ! Sa Rabelamina ?
ArchivesInsécurité et faits divers 11:35	Ivato : le gamin jouait avec une balle de fusil	23/05/2013 2	08:04	Mons – Belgique : Aina Randrianarison reconnu coupable de viols en série	23/05/2013 9	19:37	Maevatanana : les 3 individus se baladaient avec une sacoche avec une kalach et 39 balles dedans	22/05/2013 0	08:49	Vindicte populaire : 7 personnes lynchées par la foule en une semaine	22/05/2013 2	08:47	Ambatolampy : cambriolage au bureau de la CENI-T	22/05/2013 1	Tous les articles »	Le fil info tananews GMT + 314:38 Présidentielle : des candidats projettent de faire pression sur le trio rejeté par la CI	23/05/2013 17
12:29 Et donc le ninja il va continuer à s’entêter dans son unilatérisme ?	23/05/2013 9
Tout le fil de l'info »Vos réactionsntsoooooo dans Présidentielle : des candidats projettent de faire pression sur le trio rejeté par la CI @Rochri, pas mal comme suggestion,! 15:50kris dans Étudiants d’Ankatso : « On n’en a rien à faire de l’argent de la Communauté internationale » @fiondranana, quand tu regardes bien, les enfants des années 1980 ont tous la quarantaine maintenant. Eduqués dans la révolusiona sosialista,... 15:49pipoteur dans Présidentielle : des candidats projettent de faire pression sur le trio rejeté par la CI @Tsisdinika, Relisez moi bien, j'ai écrit "2 siècles", et la christianisation c'est de la colonisation non, des esprits au moins?... 15:48fiondranana dans Présidentielle : des candidats projettent de faire pression sur le trio rejeté par la CI @gourou, Be amin'ireo anie no accolyte-n'ny Bitro ka novatsiana vola fa mody milatsaka fotsiny e! Tsisy base politique fa... 15:47Ramanana dans Présidentielle : des candidats projettent de faire pression sur le trio rejeté par la CI @Rochri, ==> Ci après la liste de ces 109 (pour Rappel)
1- M. Andry Nirina Rajoelina, Président... 15:46fiondranana dans Présidentielle : des candidats projettent de faire pression sur le trio rejeté par la CI @Rabe Lita, Aleo hanao an'izany eo fa tsy hisy hifankahita eto isika malagasy..Misy iray izay ialy be vola be, manana... 15:43Tous les commentaires »	Les cours de changeEUR2847.46 […]USD2195.83 […]Ils font le buzzFetison RAKOTO ANDRIANIRINA